Daafaca bidix ee Real Madrid Ferland Mendy ayaa ka sheekeeyay qiso xanuun badan oo kubada cagta ah iyo marxaladihii kala duwanaa ee keenay in la jaro.
Waxaad tahay qashin, ma ogid
Jurgen Klopp ayaa shaaca ka qaaday dhibaatooyinka
Mendy wuxuu sheegay inuu todobo sano ku qaatay Paris Saint-Germain isla markaana uu bilaabay u ciyaarida dhalinyarada ka yar 11-ka sano laakiin uu soo gaaray dhaawac halis ah ka hor inta uusan ku biirin akadeemiga dhalinyarada.
Mendy wuxuu sheegay inuu barar daran ku dhacay jidhkiisa iyo waliba caabuq isla markaana uu in cabaar ah ku fadhiyey kursiga curyaamiinta, intaas ka dib waa inuu ku dul socdaa bir ka hor intaanu baran inuu mar kale socdo.
Ferland ayaa sidoo kale xustay in dhaqtarka uu usheegay inuusan waligiis kubad ciyaari doonin isla markaana ay suurta gal tahay in gabi ahaanba laga jaro.
Mendy ayaa yiri: “Waa sheeko fantastik ah, waqti adag ayaan soo maray laakiin waxaan ku guuleystey inaan ka baxo, waxaan 7 sano ku qaatay PSG, waxaan bilaabay inaan u ciyaaro qarnigii 11aad laakiin waan dhaawacmay ka hor intaanan aadin akadeemiyada.”
“Waxaan lahaa barar iyo barar, sidaa darteed waxaan u baahday qalliin waxaanan ku jiray isbitaalka oo aan ka soo kabsanayay muddo dheer. Waxaan xirneyn faashado labo ilaa saddex bilood.”
Qalliinka kadib, dhaqtarka ayaa iiyimid wuxuuna igu yiri mar dambe ma ciyaari doono kubada cagta, xitaa wuxuu igu yiri waxaan ubaahanahay in lakala gooyo, xoogaa ayaan ku fadhiistay kursiga curyaamiinta ka dib waxaan fuulay bir kadibna waa la igu qasbay. Baro inaad markale tagto. “